ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဂယက်ကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဘယ်ပွဲစဉ်တွေကို အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်မလဲ? (၁) – MySport Myanmar
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဂယက်ကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဘယ်ပွဲစဉ်တွေကို အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်မလဲ? (၁)
မကြာသေးခင်ကမှ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့မှာ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဆုတ်ရောင်ကူးစက်ရောဂါ Coivd-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အခုဆိုရင်တော့ အာရှဒေသတစ်ခုမှာသာမပဲ ဥရောပနယ်ပယ်ဘက်ဆီကိုတောင် ပျံနှံလာခဲ့ပြီဖြစ်ကာ ဥရောပဘောလုံးပွဲတချို့ရင်လည်း ရက်ရွေ့ဆိုင်းတာတွေ ပရိသတ်မပါဝင်ပဲ ကွင်းပိတ်ကစားရတာတွေအထိပါ လုပ်ဆောင်လာခဲ့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဒီဗိုင်းရပ််စ်ဂယက်ဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲအထိပါ သက်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကာ ဒီတစ်ပတ်မှာ ကျင်းပမယ့် ဘယ်ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲတွေက ဗိုင်းရပ်စ်ဂယက်နဲ့ ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာကို အသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။
ဗလင်စီယာ နဲ့ အတ္တလန်တာ
ဒီပွဲကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ဂယက်ကြောင့် ပရိသတ်မပါပဲ ကွင်းပိတ်ကစားရဖို့ ရှိနေပါတယ်။ အဓိကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ပြသာနာတွေနဲ့ အတော်လေး ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အီတလီစီးရီးအေ ကလပ်အသင်း အတ္တလန်တာကြောင့်ဖြစ်ကာ လက်ရှိ အတ္တလန်တာအသင်းသားတွေမှာတော့ အားလုံးက ကျန်းမာရေးကောင်းလို့နေပါတယ်။
လိုက်ဇ်ပစ် နဲ့ စပါး
ဒီပွဲကတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့ ကျင်းပဖွယ်ရှိပါတယ်။ ဂျာမန်အာဏပိုင်တွေကတော့ လူတစ်ထောင်ကျော် စုစည်းခြင်းတွေ မလုပ်ကြဖို့ တားမြစ်ထားပေမယ့်လို့ ဒီပွဲကိုတော့ ပုံမှန်အတိုင်းသာ ကျင်းပဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
လီဗာပူးလ် နဲ့ အသက်လက်တီကိုမက်ဒရစ်
ဒီပွဲကလည်း ပရိသတ်တွေနဲ့သာ ကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်။ ဗြိတိန်အစိုးရက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အားကစားနယ်ပယ်အတွင်းမှာ သက်ရောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ ယူဆထားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ဒီပွဲကို လာရောက်အားပေးခွင့် အပြည့်ရရှိနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
ပီအက်စ်ဂျီ နဲ့ ဒေါ့မွန်
ဒီပွဲကတော့ အစောကတည်းကနေ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်း ပရိသတ်မပါဝင်ပဲ ကွင်းပိတ်ပြီးသာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပဲရစ်ရဲတွေကနေ အများပြည်သူသွားလာတဲ့ နေရာများမှာ လူတစ်ထောင်နဲ့အထက် မစုစည်းကြဖို့ တားမြစ်ထားအတွက် ဒီပွဲကို ကွင်းပိတ်ပြီးသာ ကျင်းပရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
MySport Myanmar2020-03-10T01:07:35+06:30March 10th, 2020|Champions League, Football|